Maqaal – GALMUDUG oo tabtay madaxweyne XAAF | HalQaran.com
Home Opinion Maqaal – GALMUDUG oo tabtay madaxweyne XAAF
Maqaal – GALMUDUG oo tabtay madaxweyne XAAF
Maqaal (Halqaran.com) – Galmudug waa degaanka ama bulshada kaliya ee aan heysan dowlad gobaleed dhisan oo u adeegta degaanka iyo dadka daga muddo ku dhow 3 bi,l walina ma muuqato rajo wayn oo lagu dhisi karo maamul loo dhan yahay.
Axmed Ducaalle Geelle “Xaaf” ayaa afartii bishii hore oo laga joogo ku dhawaad 50 maalin, u wakiishay howlaha Galmudug wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya, kadib markii uu la heshiiyay dowladda federaalka Soomaaliya oo ay dagaalsanaayeen 2-dii sano ee la soo dhaafay.
Galmudug hadda malahan madaxweyne, siihaye madaxweyne, xukuumad iyo baarlamaan shaqeeya, waxaana shaqada Galmudug sii wada wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo go’aano ka gaarta arimaha masiriga ah ee degaanka, balse waxaa si iskood ah u shaqeeya xubno dhanka Ahlu-Sunna ka soo galay galmudug oo ugu horreeyo sheekh shaakir.
Dowladda Soomaaliya wali kuma guuleysan in ay dhisto Galmudug loo dhanyahay, waxaana sii adkaanaya xaaladda Galmudug, iyadoo ay muuqato in markale uu baaqan karo shirkii dib uheshiisiinta beelaha galmudug ee lagu balansanaa 17-ka bishaan oo maanta ku beegan.
Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa wali ku guuleysan in ay heshiis dhab ah oo lagu kalsoonyahay la gasho Ahlu-Sunna waxaana muuqata in ay doon ka sii dhacayaan waxyaabihii lagu heshiiyay.
Dad badan ayaa hadda ogaaday in Xaaf uu haayay culees badan oo aysan dareensaneen dadka soomaaliyeed, xataa dowladda soomaaliya kuma aysan baraarugsaneen dhibaatada uu ka hortaagan yahay madaxweyne Xaaf.
Inkastoo uu ahaa siyaasi mayal adag oo hadal kulul hadana waxaa loo arkaa in uu ahaa qofka kaliya ee isku heyn kara Galmudug markii loo eego xaaladda la joogo.
Hadda maxay Galmudug ka faa’iday ceyrintii Xaaf?
Waxay ka faa’iday maamul la’aan, dib u dhac, khilaaf aan dhamaanin iyo dowladda iyo aduunyada kale oo ku wareersan sida ay qabaan shacabka Soomaaliyeed.
Xaaf-na ka tagitaanka Galmudug waxa uu ka faa’iday nasiino iyo buuq la’aan iyadoo magaalada Muqdisho lagu arkayo isagoo ka soo raynaya sidii uu ahaa ee daalka iyo rafaadkii badnaa.
W/Q: Maxamed Axmed Gacal
tabtay madaxweyne XAAF
Atoore August 20, 2019 At 23:28
Galmudug markii horaa lagu dhisay sharci daro loo bareeray.Waxaana sharcidaradaas sharciyeyey Xassan Shiikh oo islahaa badso gobalada beelaha USC si ay kuu soo doortaan doorashada dambe.Galmudug waa gobal iyo nus.Gobal iyo nusna ma noqon karaan maamul gobaleed.Waana tii ay soomaaliweeyn ku heshiisay in maamul gobaleed uu noqon karo labo gobal iyo ka badan.Saas dareteed galmudug ma aha maamul sharci iyo run ku dhisan.Dhismihii suuroobe waayey ee galmudug waxaa la yiri Xassan Shiikh waxuu ku bixiyey 30 malyuun oo ahaa lacagihii loogu dhiibay soomaaliweeyn waliba dadka ku jira xeryaha qaxootiga ee xamar iyo nawaaxigeeda.Xaaraam wixii lagu bilaabaa waligood xaaraam iyo wareer kama baxaan.In ay taasi run tahay waxaa ka markhaati ah in ay dhismi waayeen galmudug iyo Hirshabeele waxa loo bixiyey.waayo labadaba Xassan Shiikh baa ku kharash gareeyey lacagihii soomaaliweeyn ka wada dhaxeeyey.